Waa maxay VSCO, barnaamijka tafatirka sawirrada oo ay weheliso bulsho weyn | Androidsis
VSCO ugu horreyn waa codsi tafatir sawir iyo shaandheyn, laakiin sidoo kale waxay ka faa'iideysaneysaa inay noqoto beel ka mid ah sawir qaadayaasha xirfadleyda iyo hiwaayadda labadaba. Khibrad sawir qaadasho ah oo adeegsanaysa barnaamij leh hal is-dhexgal isla markaana qofka isticmaala siinaya khibrad ka duwan kuwa kale.
Dhinacani waa laga yaabaa inuu yahay curyaannimadiisa ugu weyn barnaamijka moobiilka, tan iyo ilaa aad ka qabato astaamaheeda iyo isku xirkeeda, waxay kuu horseedi kartaa wadada qadhaadhka Kahor howlaha aan ku qabanno barnaamijyada kale jiffy. Aynu ku sameyno VSCO, oo ah barnaamij loogu talagalay kuwa doonaya inay tayadaas ka helaan sawirradooda.
2 Sidee u yahay barnaamijka mobilada
2.1 Quudinta ama Wararka
2.2 Si loo ogaado
3 Diiwaangelinta VSCO ee la bixiyay
4 Ku soo dejiso VSCO taleefankaaga gacanta
VSCO Cam, sida runta loogu yeero, waa a barnaamij loogu talagalay sawir qaadashada isla waqtiga fiidiyowga. Shaandheeyayaasheeda ayaa ah waxa keenay in badan oo ka ag dhawaada xeebteeda si loogu raaxeysto taabasho xirfadeed taas oo inbadan ka muuqata ilbiriqsigii ugu horreeyay ee aan khibradeena kula bilaabanay.
Marka laga reebo miirayaasha waa inaan helnaa bulshada iyo awooda aan ku daabici karno sawirada tifaftirka ah si dadka kale ay noo raacaan, uga faaloodaan oo xitaa noogu dhiiri geliyaan inaan sii wadno safarkayaga sawir qaadista
Sidii aan kor kusoo sheegnayba, VSCO sidoo kale waxaa lagu gartaa khibrad aad u yar oo dhexdhexaad ah oo madow iyo caddaan ah, iyo faahfaahintaas oo ka dhigaya wax aad u qaas ah marka mid lagu sameeyo astaamaheeda, ishaarooyinka iyo isdhexgalka kala duwan.
Taasi waa sababta codsigan waxay isu rogtay khibrad gaar ah kuwaas oo si tartiib tartiib ah isticmaaleyaal loogu daray sannado. Waa run in ay sii adkaaneyso in laga dhex muuqdo noocyada noocyada codsiyada ah, sidaa darteed VSCO lafteeda ayaa durba leh meel u gaar ah.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee VSCO taasna ka dhigaysa mid gaar ah, ayaa taasi ah Haddii aan ku daabacno sawirro bulshada dhexdeeda, miiraha la isticmaalay ayaa soo muuqan doona si kuwa kale ay ugu celiyaan. Taas oo macnaheedu yahay inaan ku dhexjirno beel farsamo iyo xigmad wadaag ah isla waqtigaas.
Sidee u yahay barnaamijka mobilada
VSCO waxay ku leedahay awoodeeda barnaamijka mobilada lacag la’aan, in kastoo Waxay leedahay micropayments si ay u awoodaan inay helaan rukhsad bille ah ama sanadle ah, ama si fudud u bixi xirmooyinka miiraha ee tayada sare leh. Xirmooyinka shaandhadaani mararka qaarkood waa la iibiyaa ama waa bilaash, markaa haddii aad inta badan ku xirnaato VSCO, goor dhow ama ka dib waxaad heli doontaa miirayaal ka sii wanaagsan.
Laakiin aan diirada saarno dhinacyada ugu muhiimsan ee barnaamijka iyada oo loo marayo qaybaheeda ugu muhiimsan.
Quudinta ama Wararka
Markuu qofku ka soo baxo markii ugu horreysay abka VSCO, wuxuu marayaa wararka wararka oo aan ku hayno sawirro ama sawirro ay daabaceen kuwa naga mid ah oo raacaya, ama kuwa ay soo jeediso VSCO. Quudinta wararkaani waa mid iskeed u shaqeysa oo u shaqeysa sida darbiyada badan ama jadwallada barnaamijyada kale ama shabakadaha bulshada.
Sida aan soo sheegnay, laga soo bilaabo Feed-kan waxaan xitaa ka arki karnaa horudhaca ama shaandhada loo isticmaalo sawir qaadista, sidaa darteed waxay noqotay il xigmad aan la soo koobi karin si markaa aan nafteena ugu dabaalno miirayaasha aan jeclaannay; macquul ahaan markaa waxaa jira awooddeena inaan sawirro fiican ku qaadno qaab, aragti, halabuur, midab iyo waxyaabo kale oo badan.
Qeybtan oo ku xigta News, waa isku mid fikradda, in kasta oo ay tahay qaybta sixirka ugu badan ee abka, maaddaama uruurinta "curated" ay yaalliin, hashtags isku mid ah, taasna waxay na geynaysaa qeybaha horeyba loogu soocay sawirrada, muuqaalka dabeecadda ama sawirrada magaalooyinka.
Runta in haddii aad rabto inaad ogaato sawir qaadayaasha ugufiican ee kujira VSCO, qaybtani waa tan lagula taliyay. Xaqiiqdii, sirdoonka macmalka ah ama AI ee abku wuxuu saameyn ku yeelanayaa halkan si uu noo geeyo uruurinta tayada sare leh iyadoo kuxiran mowduuca aan raadineyno. Waana inaan saacado iyo saacado ku qaadan karno inaan nafteenna la yaabno sida ay u wanaagsan yihiin ururintu.
Waa tan sida haddii aan galnay meel gaar noo ah oo aan sawirrada ka soo dhejineyno in aan dooneyno inaan dib u hagaajinno, ama waxaan u isticmaalnaa kaameradda VSCO inaan ku qaadno. Taasi waa, haddii aanan qorsheyneynin inaan daabacno mid ka mid ah sawirradeena ama aan aragno qof iyaga arka, waxay noqon doontaa udub dhexaadka ugu weyn ee barnaamijka si aan u awoodno inaan codsanno miirayaasha oo aan wax ka beddelno sawirrada.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee VSCO waxaan sharraxaynaa:
Badhanka daraasadda: xaga sare waxaad ka arki doontaa badhan noo ogolaanaya inaan sifeyno waxa aan ku hayno istuudiyaha si aan u aragno kaliya tafatirka, aan la saxafin, la daabicin, sawirada aan la daabicin, fiidiyowyada iyo sawirada. Sida oo kale ayaa noo oggolaaneysa inaan wax ka beddelno naqshadeynta shaashadda sawirka ama xitaa joojinta tilmaamayaasha
Roobka sawirada: waxaan heysanaa dhamaan sawirada la soo galiyay, hadaan mid dhagsana waxaan awoodnaa:
Abuur montage ah
Ku dhaji VSCO
Tifatir: halkan waxaan ka tagi karnaa si aan wax uga bedelno qaabka miirayaasha iyo dhammaan aaladaha aasaasiga ah ee VSCO ay leeyihiin
Badhanka qabashada sawirka: waxaad isticmaashaa kaamirada VSCO
+ Badhan: ku dar sawiro maktabada wareega
Sida aad halkan ka arki karto waxaan sidoo kale marin u leenahay rukunka VSCO taas oo aan hoos ku sharixi doono.
Iyo dabcan, mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan barnaamijkan wax ka beddelka sawirku waa miirayaasheeda. Iyadoo in ka badan 200 oo horudhac ah, qaar badan oo ka mid ah bixinta, oo aan ka heli doonno uruurinta iyo taasi waxay nagu martiqaadeysaa inaan muujino sawirradaas raashinka ama muuqaalka, ama dabcan sawirro; wax yar si Adobe Photoshop Qaabka kamaradaha.
Shaandheeyeyaashan waxaa lagu cusbooneysiiyay qaar cusub waxaadna heli doontaa ogeysiisyo iyaga ku saabsan. Sidoo kale VSCO waxay leedahay shaandho caqli badan oo haddii aan isticmaalno ay adeegsanayso kan fahmay inay isaga u roon tahay goobta. Dabcan, waxay adeegsan doontaa Sirdoonka Artifishalka ah si sawirka looga dhigo mid kafiican.
Marka taa laga reebo sidoo kale waxaan haynaa qalab taxane ah oo aan ku af-garaynno ama ku horumarin karno sawirrada qaab gacanta ah markaan isticmaalno qaab cayiman:
Isku dheelitirka cad
Barnaamijka Waxay leedahay kaamiro u gaar ah oo noo oggolaaneysa inaan beddelno dheelitirka cad, ISO iyo xitaa toogasho sawirada RAW si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ka dibna awood u yeelatid inaad dib u soo celiso. Qodob muhiim ah ayaa ah inaan sawiri karno sawirradan marka barnaamijyada kale ay u oggolaadaan saameynta noocaas ah laakiin ka dib.
Laga bilaabo halkan waxaan hoosta ka xariiqeynaa VSCO sidii barnaamij sidoo kale loogu talagalay abuuro bulsho raacsan hareeraha boggayaga sawirro iyo fiidiyowyo in aan daabacnay.
Waan kari karnaa xitaa u soo gudbi sawirrada isticmaaleyaasha kale si ay ugu hayaan boggeena internetka, oo ficil ahaan waxay u shaqaysaa sidii bandhig wax kasta oo aan jecel nahay, ha ahaadeen ama kuwayaga kale ama sawir qaadayaasha. Waxaan sidoo kale siin karnaa taabasho gaar ah sida booska aan ku soo bandhigno faylalka ay ka muuqato.
Waa inaad taas ku tashataa astaamaha ayaa ah kuwa dadweynaha oo xitaa ma arki kartid kuwa raacsan. Xaqiiqdiina mana jeclaan karaan ama faallo ka bixin karaan sawirrada in aan ku dhejino astaanteenna. Sababtoo ah VSCO waxay had iyo jeer isku dayday kalgacal in qaybtani ay tahay tan ugu hal abuurka badan iyada oo aan xukun laga helin isticmaalayaasha kuwa ay jecel yihiin.
Diiwaangelinta VSCO ee la bixiyay
VSCO waxay bixisaa khibrad lacag bixin oo dhameystiran taas oo noo horseedda:
Maktabad dhameystiran oo ka kooban 200 oo hore
HSL- Ku beddel midabka midabkiisu yahay HSL
Filimka X: jiilka cusub ee horudhaca VSCO
Tafatirka fiidiyowga iyo gogosha- Kooxda sawiro, videos, iyo qaabab si ay u abuuraan collage dhaqaaqaya
Caqabadaha sawir toddobaadlaha ah
Mawduuc waxbarasho oo gaar ah
El bixinta bil kasta waa 1,83 21,99 bishiiba haddii aan aadno rukunka sannadlaha ah ee of XNUMX.
Ku soo dejiso VSCO taleefankaaga gacanta
Waxa ugu fiican ee ku saabsan VSCO waa inaanan u baahnayn rukhsadda gabi ahaanba waayo-aragnimadeeduna waa mid qumman, maadaama aysan xitaa lahayn xayeysiis waana nadiif nadiif ah, is dhexgal wacan iyo in markaan helno ay ku habboon tahay howlahan.
Waad awoodaa kala soo bax Google Play Store:
VSCO: Tifatiraha Sawirka & Fiidiyowga
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Waa maxay VSCO, barnaamijka tafatirka sawir ee beel weyn
Miyay barnaamijyadaadu u xidhayaan si aan munaasib ahayn moobaylkaaga ama Chromecast oo ay la socdaan Google TV? Waxaan leenahay xalka